China CY-9 (Washing machine rack) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
1, Iyo yakasarudzika dhizaini yechikepe chinofamba ichiwedzera nzvimbo yekuchengetedza isina kukanganisa runako, uye inoita kuti hupenyu huve hutsva.
2） 25kg yakasimba-inotakura, isiri nyore kuzunza, kugadzikana, hapana kushanduka.
3, Iyo-yakaturikidzana clapboard iri nyore kuisa uye kutora, ichiita nzvimbo yakapararira kuita yenguva dzose, ichiita iyo imba kamwe kamwe kupenya uye kupenya.
4, Isu takashongedzerwa netsoka dzinochinjika dzisinga tsvedza pazasi pasherufu, iyo inogona kugadzirisa kukwirira kudzivirira kusaenzana kwepasi nhanho, uye iyo isina-slip dhizaini ndeye zvakare kuona kuchengetedzwa kwevatengi kana uchishandisa shefu.
5, Nesimba rakasimbiswa chigamba, simbisa yakasimba, kwete kuzunungusa, peta rugare rwepfungwa. Hazvichadi kubaya zvibhakera, namatira kune dhizaini yepasi zviri nyore.
Enzanisa:Inofananidzwa nemamwe masherufu, hunhu hwedu huri nani, hwakareruka uye nyore kufamba. Zvichienzaniswa nemasherufu epurasitiki edu akasimba, uye iyo nguva pakati peimwe nhurikidzwa inokwanisa kuisa pasi mbichana mbichana haizove nechinhu chakanyanya kukwirisa kuisa zvinonyadzisa. Kugadziriswa kwemazuva ese zvakare kuri nyore kwazvo, ingoipukuta netauro. Nekuti isu tinoshandisa pendi yekubheka, zvinokuvadza kumuviri wemunhu zvidiki hazvisi nyore kuita ngura.
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kukodzera vatengi vane mafurati madiki, kwete akanaka chete asiwo anoita kuti imba iratidzike uye igoze.
Mushure mekutengesa:Tine yekumisikidza kuraira mavhidhiyo, kana iwe uine chero mibvunzo iwe unogona kutirovera runhare neemail uye isu tinotumira nyanzvi kuti itaure newe nekukurumidza sezvinobvira kugadzirisa dambudziko. Kana iwe uine chero mazano nezve zvigadzirwa zvedu, iwe unogamuchirwawo kwazvo kuti utibvunze, isu tinoteerera iwe uye tinatsiridze.
Pashure: CY-10 (Pasi-kune-siringi mbatya rutsigiro)
Zvadaro: CY-8 (Toilet rack)
Nhema Kuomesa Rack Hembe
Zvipfeko Kuomesa Rack
Huru Kuomesa Rack Hembe
Nguo Dzakasimba Kuomesa Rack